Bocas Bali Luxury Water Villas | Bocas del Toro Resorts - Hotels Luxury Panama
Fandosirana Luxury Luxury nosy manokana ao Panama
Misokatra indray ny volana septambra
Trano fandraisam-bahiny olon-dehibe 16+
Anisan'izany ny sakafo sy zava-pisotro Epikoreana
Tsy misy fanafoanana na sara fanovana
“Ny miaina no zavatra tsy fahita indrindra eto an-tany. Ny ankamaroan'ny olona dia misy, izany ihany. ” — Oscar Wilde
Ny architect Andres Brenes, fanta-daza indrindra amin'ny fandrafetana ny hotely tsara tarehy indrindra eran-tany, dia namorona sangan'asa mahasarika hafa. Ao anatin'ny fahitana ny tanànan'i Bocas ao Bocas Del Toro, Panama, dia misy toeram-pialan-tsasatra tsy manam-paharoa avy any Bali, Bocas Bali, izay mifaninana amin'ireo toeram-pialan-tsasatra manaitra indrindra eran-tany. Scott Dinsmore, mpampiantrano karismatika ao amin'ny toeram-pitsangatsanganana, dia miantoka traikefa mafana sy tsy hay hadinoina ho an'ireo vahiny, izay mankafy ny fifangaroana tsy fahita firy amin'ny tsy ara-potoana tsy ara-potoana ao amin'ny toerana Karaiba kanto.
Naorina ambonin'ny rano amin'ny Stilts
Mialà eo amin'ny lalantsara midadasika mankany amin'ny tora-pasika Kupu-Kupu, ahitana ny Tipsy Bar malaza tsy ho ela. Alaivo ny masoandro sy ny tsio-drivotra ary ataovy azo antoka ny hiaina ilay tohatra mitovitovy amin'ny dobo mankany amin'ny rano mangatsiatsiaka tsy manam-paharoa any Karaiba mba hilomano amin'ny tolakandro.
Ny vahiny dia mankafy fiainana an-kalamanjana mirefy 1,100 metatra toradroa, mipetraka amin'ny tsangambaton'ny ranomasina Karaiba. Ho fanampin'ny dobo manokana sy ny terrasse, ny villa tsirairay dia manana fandriana mpanjaka miaraka amin'ny lamba rongony manaitra ary sary an-drindrina vita sokitra vita amin'ny tanana. Amin'ny fomba nentim-paharazana Bali, ireo mpanakanto dia nanokana ora 1,000 mahery handrafetana ny fanaka hazo teak tsirairay ao amin'ny villa.
fanomezana be dia be
Fisakafoana & Cocktails
Ny traikefa nisakafoanao tao amin'ny The Elephant House sy The Coral Café dia nandao ny saran-dàlana nentim-paharazana rehetra ho an'ny akora vaovao eo an-toerana sy ny hazan-dranomasina avy amin'ny mpanjono Bocas. Nahazo aingam-panahy avy amin'ny trano fonenanay eto an-toerana, ny atidohanay chef chef sakafo vaovao isaky ny sakafo.
Milomano na snorkel mivantana avy ao amin'ny villa misy rano. Na diniho ny rano Karaiba manodidina ny nosintsika amin'ny alalan'ny kayak na paddleboard. Ho an'ny traikefa snorkeling mitokana, ny nosy kely mifanandrify amin'ireo villa dia manana fiainana an-dranomasina mahavariana.
Mafana isan-taona ny rano cerulean ao Bocas Bali. Fa raha tianao kokoa ny rano mamy noho ny rano masira, ny dobo clubhouse mahavariana dia toerana milamina hijerena masoandro.
Art sy Architectural Design
Miaraka amin'ny feo Balinese manankarena
Ny nosy kely tsy miankina iray ao Bocas Del Toro no mety ho toerana farany andrasanao hiaina ny maritrano manaitra nohatsaraina amin'ny sary sokitra vita amin'ny savony vita amin'ny tanana ary sangan-kanto voajanahary voajanahary roa taonina mandravaka ny kianja alfresco misy gorodona marbra. Ho an'ireo izay tia zavakanto - maro ny tsy ampoizina miandry.
Fiarovana ny haran-dranomasina
Mazoto mitahiry ny hakanton'ny nosintsika manokana sy ny ranony izahay. Bocas Bali dia 100% miala amin'ny tambajotra. Mitahiry ranonorana 55,000 litatra ny koveta fanangonan-drano mba hanomezana izay ilaintsika rano madio rehetra. Ary ny masoandro dia mamokatra herinaratra ho antsika amin'ny endriky ny herin'ny masoandro.